Fil d'actualités du 20/04/2018
20/04/2018 - 09:30 : JIRAMA: Hovelomin'ny AKSAF Power ny Centrale thermique N2 eny Ambohimanambola tsy niodina nanomboka ny 2015, ka izy ireo no hitantana azy mandritra ny dimy taona. Aorian'izay ary aorian'izay dia hiverina 100% amin'ny JIRAMA.
20/04/2018 - 09:00 : CSA: Nigadona teny Ivato alina tamin'ny 10:30 ireo delegasionin'ny Club Sportif de l'Armee (CSA) St Petersburg avy any Rosia. Miisa 15 izy ireo miaraka amin'ireo mpitantana sy mpikarakara.
20/04/2018 - 08:30 : BASIKETY: Anio 20 Aprily ao amin' ny Lapan' ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalao fihantsiana hifanandrinan'ny ALL-STARS DU PRESIDENT sy ny Club Sportif de l' Armée de Saint Petersbourg avy any Russie.
19/04/2018 - 15:00 : TARIKA NY VOANIO: Efa tonga ao amin'ny Tranompokonolona Analakely ny nofo mangatsiakan'i Clarisse, izay andrasana ao anio alina.